करिब २ करोड नोक्सानीमा हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, विद्युत बिक्री आम्दानी पनि ३२.८१ %ले घट्यो - Arthatantra.com
करिब २ करोड नोक्सानीमा हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, विद्युत बिक्री आम्दानी पनि ३२.८१ %ले घट्यो
काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरिेको छ ।
गत आवमा कम्पनी १ करोड ८८ लाख १२ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा देखिएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा १ करोड ४३ लाख २९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीको संचालन नाफा पनि घटेको छ । गत आवमा कम्पनीले १० करोड ८३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संचालन नाफा गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३९. ६३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमाम कम्पनीको संचालन नाफा १७ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
गत आवमा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी ३२.८१ प्रतिशतले घटेर १४ करोड ८३ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २२ करोड ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष पनि २६ करोड ६६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ । कम्पनीको जगेडा कोष अघिल्लो आवमा पनि २५ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि १.८० ऋणात्मक रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ भने ८३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ९ बुधवार १०:४३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे तेह्रथुम पावरको आइपीओ निष्काशन, कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन ?
पछिल्लाे घट्यो सुनको मूल्य, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?